मौसम विज्ञानमा आर्द्रता र यसको महत्व के हो नेटवर्क मौसम विज्ञान
मौसम विज्ञानमा आर्द्रताको महत्त्व
जर्मन पोर्टिलो | | Ciencia
आर्द्रता पर्याप्त महत्त्वपूर्ण मौसम परिवर्तनक हो किनकि पानीको बाफ सधैं हाम्रो हावामा अवस्थित हुन्छ। हामीले सास फेर्ने हावाको तापक्रमको बावजुद यसले प्रायः केही पानीको बाफ लिन्छ। हामी खास गरी चिसो जाडोका दिनहरूमा आर्द्रता देख्ने बानी भएका छौं।
पानी वातावरणको मुख्य अंशहरू मध्ये एक हो र तीनै तीन राज्यहरूमा फेला पार्न सकिन्छ (ग्यास, तरल, र ठोस)। यस लेखमा मँ मौसमको भ्यारीएबल र यसको लागि के हो भनेर आर्द्रताको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुराको व्याख्या गर्न जाँदैछु। के तपाई यस बारे थप जान्न चाहानुहुन्छ?
1 आर्द्रता भनेको के हो? आर्द्रताका प्रकारहरू
2 हावा मास कहिले सन्तुष्ट हुन्छ?
3 हामी कसरी एक एयर मास संतृप्त बनाउन सक्छौं?
4 कार विन्डोजहरु किन धुवाँ गर्छन् र हामी कसरी यसलाई हटाउने?
5 तपाईं कसरी आर्द्रता र वाष्पीकरण मापन गर्नुहुन्छ?
आर्द्रता भनेको के हो? आर्द्रताका प्रकारहरू
आर्द्रता हावामा पानीको बाफको मात्रा हो। यो रकम स्थिर छैन, तर बिभिन्न कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, जस्तै यदि हालसालै यो वर्षा भएको छ, यदि हामी समुद्रको नजिकै छौं, यदि त्यहाँ बोटबिरुवाहरू छन्, आदि। यो हावाको तापक्रममा पनि निर्भर गर्दछ। त्यो हो, जसै हावाले तापक्रम घटाउँछ यसले कम पानीको बाफ राख्न सकेको छ र त्यसैले हामी सास फेर्दा धुंध देखा पर्दछ, वा राती शीत। हावा पानीको बाफले भरिपूर्ण हुन्छ र यति धेरै समात्न सक्षम हुँदैन, त्यसैले पानी फेरि तरल हुन्छ।
यो जान्न उत्सुक छ कि कसरी रेगिस्तानको एयरले ध्रुवीय हवा भन्दा बढी आर्द्रता राख्न सक्षम छन्, किनभने तातो वायु यति चाँडो पानीको बाफले भरिपूर्ण हुँदैन र अधिक मात्रामा राख्न सक्षम छ, यो तरल पानी नहुँदा।
त्यहाँ वातावरणमा चिस्यान सामग्रीलाई सन्दर्भित गर्न धेरै तरिकाहरू छन्:
निरपेक्ष आर्द्रता: पानी बाफ को ठूलो मात्रा, ग्राम मा, सुख्खा हावा को 1m3 मा निहित।
विशिष्ट आर्द्रता: पानीको बाफको द्रव्यमान, ग्राममा, हवाको १ किलोग्राममा।
Rमिश्रण क्षेत्र: पानीको बाफको द्रव्यमान, ग्राममा, सुख्खा हावाको १ किलोमा।
यद्यपि, ओसको सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको उपायलाई भनिन्छ आरएच, जुन प्रतिशत (%) को रूपमा व्यक्त गरिएको छ। यो वायु द्रव्यमानको वाष्प सामग्री र यसको अधिकतम भण्डारण क्षमताको बीचमा विभाजन र यसलाई १०० ले गुणा गर्दा परिणाम प्राप्त हुन्छ। यो मैले पहिले टिप्पणी गरेको छु कि जति हावा मासको तापमान छ, अधिक तापक्रमले यसलाई समात्न सक्षम गर्दछ। अधिक पानी बाफ, ताकि यसको सापेक्ष आर्द्रता बढी हुन सक्छ।
हावा मास कहिले सन्तुष्ट हुन्छ?
पानीको बाफ राख्ने अधिकतम क्षमतालाई स्याचुरेटिंग बाफ प्रेशर भनिन्छ। यो मानले पानीको बाफको अधिकतम मात्रालाई स indicates्केत गर्दछ जुन एक एयर मासले तरल पानीमा परिर्वतन गर्नु अघि हुन सक्छ।
सापेक्ष आर्द्रताका लागि धन्यबाद, हामी एक हावा द्रव्यमान यसको संतृप्तिमा पुग्न कत्तिको नजिक छ भन्ने कुराको कल्पना गर्न सक्दछौं, त्यसकारण, ती दिनहरू जुन सापेक्ष आर्द्रता १००% छ त्यसले हामीलाई बताउँछ कि हावा द्रव्यमान अब छैन। अधिक पानी वाष्प भण्डार गर्न सक्दछ र त्यहाँबाट, वायु द्रव्यमानमा कुनै थप पानी थपिएमा पानीका थोपाहरू (शीतका रूपमा चिनिन्छ) वा आइस क्रिस्टलहरू बन्नेछन्, वातावरणीय अवस्था मा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया यो हुन्छ जब हावाको तापमान एकदम कम छ र त्यसैले यो अधिक पानी बाफ राख्न सक्दैन। हावाको तापक्रम बढ्दै जाँदा यसले पानीको बाफलाई समृद्ध बनाउँन सक्षम गर्दछ र यसैले यसले पानीको थोपा बनाउँदैन।
उदाहरणका लागि, समुद्री तटहरूमा, गर्मीमा उच्च चिसो र "चिपचिपा" गर्मी हुन्छ भन्ने तथ्यका कारण वायु दिनहरूमा छालहरूको थोपा हावामा रहन्छ। यद्यपि यसको उच्च तापमानको कारण, पानीका थोपाहरू बनाउँदैन वा संतृप्त हुन सक्दैन, किनकि हावाले धेरै पानी बाफहरू भण्डार गर्न सक्दछ। गर्मीमा शीत नहुनुको कारण यही हो।
हामी कसरी एक एयर मास संतृप्त बनाउन सक्छौं?
यसलाई सही तरिकाले बुझ्नको लागि हामीले हिउँदको रातहरूमा मुखबाट पानीको बाफ निकाल्दा सोच्नु पर्छ। हामीले सास फेर्दा त्यो हावामा श्वास हाल्दछौं जब एक निश्चित तापक्रम र पानीको बाफ सामग्री हुन्छ। जे होस्, जब यो हाम्रो मुखबाट निस्कन्छ र बाहिर चिसो हावाको सम्पर्कमा आउँदछ, यसको तापक्रम द्रुत रूपले तल झर्दछ। यसको चिसो भएको कारण, हावा मास वाफ समावेश गर्न क्षमता गुमाउँछ, सजिलै संतृप्तिमा पुग्न। तब पानीको बाफ घनघोर हुन्छ र धुंध बनाउँछ।
फेरि, म हाईलाईट गर्दछु कि यो उही मेकानिमेसन हो जसद्वारा शीत जाडो रातहरूमा हाम्रा सवारी साधनहरू रोक्ने शीतले बन्यो। तसर्थ, तापक्रम जसमा वायुको द्रव्यमानले कम्पेन्सेसन उत्पादन गर्न चिसो गर्नुपर्दछ, यसको वाष्प सामग्री नबनाईकन, ओस तापमान र ओस बिन्दु भनिन्छ।
कार विन्डोजहरु किन धुवाँ गर्छन् र हामी कसरी यसलाई हटाउने?
जाडोमा हामीसँग हुन सक्ने यो समस्या समाधान गर्न, विशेष गरी रात र वर्षाको दिनमा, हामीले हावा संतृप्तिको बारेमा सोच्नु पर्छ। जब हामी कारमा चढ्छौं र सडकबाट आउँछौं, हामीले सास फेर्दा गाडीको पानीको बाफको मात्रा बढ्न थाल्छ र यसको न्यून तापक्रमले गर्दा यो एकदम चाँडो सन्तुष्ट हुन्छ (यसको सापेक्ष आर्द्रता १००% सम्म पुग्छ)। जब कार भित्रको हावा संतृप्त हुन्छ, यसले विन्डोजहरू फोग गर्न थाल्छ किनभने हावाले अब कुनै पानी वाष्फ राख्न सक्दैन र हामी सास फेर्न जारी राख्छौं र अधिक पानी वाष्प निकाल्छौं। यसैले हावा संतृप्त हुन्छ र सबै अधिशेष तरल पानीमा परिणत हुन्छ।
यो हुन्छ किनकि हामीले हावाको तापक्रम स्थिर राख्यौं, तर हामीले पानीको बाफ धेरै थप्यौं। हामी कसरी यसलाई समाधान गर्न सक्दछौं र फोग्ड गिलासको कम दृश्यताका कारण दुर्घटनामा पर्न सक्दैनौं? हामीले तताउने प्रयोग गर्नु पर्छ। तताउने र क्रिस्टलको लागि निर्देशन प्रयोग गर्दै, हामी हावाको तापक्रम बढाउने छौं यसले सन्तुष्ट नहुँदा अधिक पानीको बाफ भण्डार गर्न सक्दछ। यस तरिकाले, कुहारी विन्डोहरू हराउनेछ र हामी राम्रो ड्राइभ गर्न सक्दछौं, कुनै थप जोखिम बिना।
तपाईं कसरी आर्द्रता र वाष्पीकरण मापन गर्नुहुन्छ?
आर्द्रता प्राय: साइकोरोमिटर भन्ने उपकरणले मापन गरिन्छ। यसमा दुई बराबर थर्मामीटरहरू छन्, जसमध्ये एकलाई "ड्राई थर्मामीटर" पनि भनिन्छ, केवल हावाको तापक्रम प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। अर्को, जसलाई "भिजेको थर्मामीटर" पनि भनिन्छ, एक भाँडोले यसलाई पानीको भण्डारको सम्पर्कमा राख्ने गरी एक कपडाले छोपिएको हुन्छ। अपरेसन एकदम सरल छ: पानीले वेबलाई बाफ पार्दछ र यसको लागि यसले वायुबाट ताप लिन्छ जुन यसको वरिपरि छ, जसको तापक्रम ड्रप गर्न थाल्छ। तापक्रम र हावा मासको प्रारम्भिक बाफ सामग्रीमा निर्भर गर्दै, वाष्पीकरण गरिएको पानीको मात्रा बढी वा कम हुनेछ र समान हदसम्म त्यहाँ भिजेको थर्मामीटरको तापक्रममा ठूलो वा कम ड्रप हुनेछ। यी दुई मानहरूको आधारमा सापेक्ष आर्द्रता गणितिय सूत्र प्रयोग गरी गणना गरिन्छ जुन तिनीहरूसँग सम्बन्धित छ। अधिक सुविधाको लागि, थर्मामिटर डबल प्रविष्टि टेबल्सको साथ आपूर्ति गरिन्छ जुन दुई थर्मामिटरको तापक्रमबाट प्रत्यक्ष आर्द्रताको मान दिन्छ, कुनै गणना गरे बिना।
त्यहाँ अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट छ, जसलाई पहिलेको तुलनामा सटीक भनिन्छ, जसलाई एस्पाइरोसिप्रोमिटर भनिन्छ, जहाँ सानो मोटरले यो सुनिश्चित गर्छ कि थर्मामिटर निरन्तर हावामा छन्।
जस्तो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, जब यो मौसम विज्ञान र मौसम विज्ञानको कुरा आउँछ, आर्द्रता एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » मौसम विज्ञानमा आर्द्रताको महत्त्व
जोस अल्बर्टो भन्यो
उत्कृष्ट धेरै व्याख्यात्मक लेख, म तपाईंलाई आफूले गरेको कामको लागि बधाई दिन्छु, बधाई छ ..
जोसे अल्बर्टोलाई जवाफ दिनुहोस्
राउल Santillan भन्यो
उत्कृष्ट लेख जर्मन पोर्टिलो, के तपाईंलाई थाहा छ कसरी कार्डबोर्ड वा कागजबाट बनेको कुनै उत्पादमा रहेको नमी अवशोषित गर्न सकिन्छ?
वा यदि यो हटाउन सकिएन,% आर्द्रता घटाउनुहोस्!
राउल Santillan लाई जवाफ दिनुहोस्
मौसम परिवर्तनको अस्तित्व को प्रमाण
के मृत सागर हराउन सक्छ?